Blockchain समाचार 04.06.2018 - Blockchain समाचार
जुन 4, 2018 व्यवस्थापक
Blockchain समाचार 04.06.2018
Bittrex लगानीकर्ताले अमेरिकी डलर संग cryptocurrency किन्न अनुमति दिन्छ
लगानीकर्ताले अब अमेरिकी डलरमा cryptocurrencies किन्न नयाँ अवसर.
Bittrex, एक सिएटल आधारित cryptocurrency विनिमय, कि लगानीकर्ताले अमेरिकी डलरमा डिजिटल सिक्का किन्न अनुमति दिन्छ एउटा सम्झौता पुगेको छ. विगतमा, मात्र सिक्का मा कारोबार कोइनबेस, क्यालिफोर्निया मा एक डिजिटल मुद्रा, डलरमा किनेको सकिएन. कि लगभग एक अंश हो 1500 डिजिटल सिक्का को cryptocurrenices ब्रह्माण्ड मा अस्थायी.
अन्य सिक्का किन्न, लगानीकर्ताले पहिलो Bitcoin मा आफ्नो पैसा रूपान्तरण थियो. अब तिनीहरूले Bittrex छ.
संस्थापक र सीईओ बिल Shihara CNBC भन्नुभयो लक्ष्य थियो “Bittrex मा सकेसम्म धेरै बजार विस्तार गर्न,” उहाँले शुक्रबार भने “छिटो पैसा।”
“साथै यो विस्तार, Bittrex हरेक ग्राहक अमेरिकी डलर व्यापार पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ,” उसले भन्यो.
विनिमय पनि बजार सार्न मदत गर्न सक्छ. यति धेरै सिक्का मात्र Bitcoin मार्फत खरिद गर्न सकिएन देखि, Bitcoin र धेरै अन्य डिजिटल मुद्राहरू को मूल्य राम्ररी correlated. यी गुप्त एकाइहरु को मूल्य अहिले Bitcoin देखि decouple सुरु, Shihara भने, थप लगानीकर्ताले डलरमा व्यापार रूपमा.
हाल, लगभग 200 विभिन्न डिजिटल सिक्का Bittrex मा कारोबार गर्न सकिन्छ. सीईओ भने एक “सानो, सुरुवातमा साझेदार संख्या चयन” शेयर बजार डलरमा भुक्तानी गर्न काम गर्छ.
“यो चरण मा हामी हाम्रो सिस्टम परीक्षण छन्,” उसले भन्यो. “हामी तिनीहरूले फिएट जम्मा र withdrawals प्रक्रिया गर्न निश्चित गर्न बैंकहरू संग राम्ररी काम, र हामी संग व्यापार इन्जिन सही कार्गो ह्यान्डल गर्न सक्षम हुनेछ।”
Cryptocurrency संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै हदसम्म unregulated रहिरहन्छ, व्यापक ठगी र counterfeiting ICOs एक परिदृश्य मा सिक्का होसियार हुन धेरै वित्तीय संस्थाहरू र लगानीकर्ताले पैदा गर्न. अन्य व्यापारीहरु यस्तो Bitcoin रूपमा डिजिटल सम्पत्ति लगानी गर्न विदेशी बजार खोजी छन्.
लागि क्राकेन दैनिक बजार रिपोर्ट 03.06.2018
क्राकेन डिजिटल सम्पत्ति EXCHANGE
$139एम आज सबै बजार मार्फत कारोबार
गुप्त, युरो, अमेरिकी डलर, JPY, CAD, GBP
स्याउ सह-संस्थापक स्टीव Wozniak आशा Bitcoin एकल वैश्विक मुद्रा हुन्छ
Twitter सीईओ ज्याक Dorsey हालै उहाँले विश्वास गर्छ Bitcoin एकल वैश्विक मुद्रा हुनेछ भन्नुभयो, एप्पल सह-संस्थापक स्टीव Wozniak आशा छ कि हुनेछ केही.
“म ज्याक Dorsey के भन्छ मा किन्न, म आवश्यक यसलाई हुन जाँदै गर्नुपर्छ विश्वास छ कि, तर यो बाटो हुन किनभने म चाहन्छु, कि त शुद्ध सोचाइ छ… Bitcoin गणितीय परिभाषित गरिएको छ, त्यहाँ Bitcoin को एक निश्चित मात्रा छ, त्यहाँ वितरण गर्नुपर्छ तरिका हो ... र यो शुद्ध छ र त्यहाँ कुनै मानव चलिरहेको छ, त्यहाँ चलिरहेको कुनै कम्पनीको र यो बढ्दै र बढ्दै ... र जीवित ... बस छ, मलाई त्यो प्राकृतिक छ र प्रकृति हाम्रो सबै मानव अधिवेशनमा भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा भन्छन्।”
नयाँ प्रविधिहरू Bitcoin गरेको scalability समाधान गर्न आउँदैछन्
एएमपी अहिले myri मिलती ...
लहर WINS 16%, कोइनबेस सबै आँखाहरु
को लहर मूल्य छ ...
Blockchain समाचार 20.07.2018
अघिल्लो पोस्ट:Ethereum वालेट ImToken छ $ 35जम्मा मा बी, धेरै 99% अमेरिकी बैंकहरू को
अर्को पोस्ट:Blockchain समाचार 05.06.2018